လျှပ်စစ် operated အပိုင်း အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator
Rotary လျှပ်စစ် Actuator
အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator
multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator
linear လျှပ်စစ် Actuator
နှစ်ချက် ခေတ္တ Pneumatic Actuator
တခုတည်းသော ခေတ္တ Pneumatic Actuator
နွေဦး ပြန်လာ Pneumatic Actuator
ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > လျှပ်စစ် operated အပိုင်း အလှည့် actuator
ဉာဏ်ကောင်းသော linear လျှပ်စစ် actuator
ဉာဏ်ကောင်းသော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator
ဉာဏ်ကောင်းသော စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator
လျှပ်စစ် operated အပိုင်း အလှည့် actuator
AOX-မေး စီးရီး လျှပ်စစ် operated အပိုင်း အလှည့် actuaသို့r ဖြစ် သငျ့လျြောသော ဘို့ အဖွင့်အပိတ် / ပြောင်းလဲပစ် သေးငယ်သော ဘောလုံးကို / plug ကို vavles နှင့် damper auသို့mation.Sတွင်ce 1997, AOX ရှိပါတယ် လုပ် တိုင်း efဘို့t သို့ ပို့ အဆိုပါ အမြင့်ဆုံး အရည်အသွေး AOX-မေး စီးရီး လျှပ်စစ် operated အပိုင်း အလှည့် actuaသို့r နှင့် န်ဆောင်မှုများ ဘို့ ကျွန်တော်တို့၏ cusသို့mers.Through အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော စီမံခန့်ခွဲမှု, နည်းပညာ တိုးတက်ရေး နှင့် လူ့ resကျွန်တော်တို့၏ces စီမံခန့်ခွဲမှု, ကျွန်တော်တို့ လိမ့်မည် ကြိုးစား သို့ ခဲ နှင့် မြှင့်တင်ရန် အဆိုပါ တိုးတက်ရေး ၏ အဆိုပါ တွင်dustry.We များမှာ မျှော်လင့် ဖြစ်လာသည် yကျွန်တော်တို့၏ ရှည်လျားသော သက်တမ်း အပိုင်းner တွင် Chတွင်a.
torque 50 ~ 6000N.m rangeï¼
22 ~ 185 S ကtimeï¼ switching
Protectionï¼ IP67, (IP68 ရွေးချယ်နိုင်) Exdâ¡ CT5
Voltageï¼ AC110 ~ 265V, AC / DC 24V Multi ဗို့ input ကို
လူပျိုအဆင့်: AC220V / AC110V / AC24V / DC24V
torque switch ကို: ပိတ် / ဖွင့်ပါ, တစ်ဦးချင်းစီ 1
output signal ကို (တွင်-off အမျိုးအစား): အပြည့်အဝပွင့်လင်း & ကိုအပြည့်အနီးစပ် passive အဆက်အသွယ် (2A 250VAC) ။
အမျိုးအစားပြောင်းလဲပစ် input / output ကို signal ကို (4-20mA (std configuration များ); 0-10V & 2-10V optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသခံထိန်းချုပ်ရေးယူနစ်: ပွင့်လင်း / နီးကပ် / မှတ်တိုင်၏ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်မှုဖု, အနီးကပ်ထိန်းချုပ်ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု switch ကိုဖု / (Non-ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော) ထိန်းချုပ်မှုတားမြစ်
display Mode ကို: LCD ကို, ပွင့်လင်း၏အရိပ်အယောင် (0-100%) နှင့်နီးကပ် / ပွင့်လင်းအမှား
ရေနှင့် explosionproof ပေးခြင်း o-လက်စွပ်စနစ်ဖြင့် 1. မျးခံဆောက်လုပ်ရေး။
(optional ကို: explosionproof / Exd IIC T5, IP68)
AOX-မေးစီးရီးလျှပ်စစ် operated တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator များအတွက် 2. အာကာသအပူပေးစက်
အပူတားဆီးဖို့ builtin အပူချိန် switch ကိုအတူ -Metal ထည်, အစာရှောင်အပူ, ရှည်သောအသက်။
ကြွေပိတျထားသောအဖွဲ့ဝင် -Core, ယိုစိမ့်မရှိစွန့်စားမှုလည်းမရှိ။
အဖုံးနှင့်အိုးအိမ်များအကြား AOX-မေးစီးရီးလျှပ်စစ် operated တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator များအတွက် 3. Tapered interface ကို: လွယ်ကူသောရုတ်သိမ်းသည်ဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အိမ်ရာမှတက်ကိုဖုံးလွှမ်း။
မက်စ် Output torque
60 / 50Hz
မက်စ်ဒရိုက်ဗ်ကို Shaft Size ကို
na · M က
1.10 / 0.95
0.55 / 0.54
0.3 / 0.3
1.65 / 1.67
0.88 / 0.84
၌ 0.31 / ၌ 0.31
0.30 / ၌ 0.31
1.67 / 1.67
0.89 / 0.85
1.85 / 1.86
0.92 / 0.92
0.35 / 0.35
0.34 / 0.34
3.60 / 3.62
1.55 / 1.58
0.59 / 0.59
0.58 / 0.58
3.65 / 3.62
1.60 / 2.20
0.60 / 0.59
0.59 / 0.58
4.10 / 4.10
2.15 / 2.20
0.85 / 0.85
0.79 / 0.79
4.20 / 4.10
2.35 / 2.30
0.87 / 0.87
0.81 / 0.81
ဝင်း: IP67, NEMA4, Exd II ကို CT5
စံ: 220VAC / 1ph
optional: 110VAC / 1ph, 380V / 440V / 3ph, 50 / 60Hz, A 10% ±
24VDC / 110VDC / 220VDC
ကန့်သတ် switch ကို
2A ပွင့်လင်း / ပိတ်, SPDT, 250VAC 10A
auxiliary န့်သတ်ချက် switch ကို
torque switch ကို
အနီးကပ် / ပွင့်လင်း, အသီးအသီး 1, SPDT, 250VAC 10A
90Â°á± 10A °
internal-ထားရှိအပူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပွင့်လင်း120âတစ်±5â / ပိတ်97âတစ်±5â
ယန္တရား Declutching, handwheel ခြင်းဖြင့်လုပ်ကိုင်ရန်
self-သော့ခတ် device ကို
30W (110V / 220VAC)
ပြွန် entry ကို
2 PT3/ 4A
-25âï½ + 70âï¼-30âတစ်-40âတစ်-60âoptionalï¼
အမဲဆီmolyï¼ EP typeï¼
သံမဏိ, လူမီနီယမ်အလွိုင်း, လူမီနီယမ်ကြေးဝါ, Polycarbonate
မက်စ်90ï¼ RH အ
X ကို Y ကို Z ကို 10g, 0.2ï½ 34 Hz, 30 မိနစ်
အပူပိုင်းအမှုန့်, Epoxy polyester မြင့်မား Anti-ချေး
option ကို Specification
¡CT5ï¼â Exd actuatorï¼ပေါက်ကွဲမှု-အထောက်အထား
Potentiometer unitï¼ 1k-10Kï¼
အချိုးအစားကိုထိန်းချုပ်ယူနစ် (ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြ 4-20mA, DC / 1-5V / 1-10V)
ဒေသခံထိန်းချုပ်ရေးယူနစ် (ဒေသခံထိန်းချုပ်မှုပွင့်လင်း / ရပ်တန့် / နီးကပ် optional ကို switch ကိုဒေသခံ / ဝေးလံခေါင်သီ switch သည်)
ခရီးသွား120Â°, 180Â°, 270Â°
ရေအထောက်အထား actuator (IP68,10M, 250HR)
လျှပ်စစ်သံလိုက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဂီယာပေါင်းစည်းမော်တာ starter reverse
torque switch ကို (SPDTÃ2250VAC 10A)
လျှပ်စစ်လက်ရှိအနေအထားကိုအာရုံခံကိရိယာ (output ကို 4-20mA, DC)
မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ actuator (-10âï½ + 100â)
အနိမ့်အပူချိန်ခုခံ actuator (-60âï½ + 30â)
လျှပ်စစ် operated AOX-မေးစီးရီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator အရည်သို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့, မှုန်သို့မဟုတ်အမှုန်များ၏စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရေပေးဝေရေး, မိလ္လာကုသမှု, ဓါတ်အားပေးစက်ရုံများ, ပိုက်လိုင်းများ, သန့်စင်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံများအပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်များတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော operate ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ရရှိသောအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပြည့်အဝကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းပြသရာဖြစ်ပါတယ် နှင့်လျှပ်စစ် operated AOX-မေးစီးရီး၏အရည်အသွေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်လျှပ်စစ် operated ပုံမှန် AOX-မေးစီးရီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာများတွင်ရှိသည်။
မေး: Whatâသင့်ရဲ့စံပို့ကုန် AOX-မေးစီးရီးလျှပ်စစ် operated တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလှည့် actuator များအတွက်ထုပ်ပိုး s?
ဖြေသေးငယ်တဲ့အမိန့်သည်: ပူဖောင်းပလပ်စတစ်အထုပ်အသီးအသီး pc ပုံးပြီးတော့ယက်လုပ်ခြင်းအိတ်သို့ရန်။
အကြီးစားအလို့ငှာ: အထပ်သားကိစ္စတွင်သို့ထို့နောက်ပုံး, ပုံးသို့ပူဖောင်း plactic အထုပ်။
ဖြေကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်လျှပ်စစ် actuatir, pneumatic actuator, ကန့်သတ် switch ကို, စတာတွေဖြစ်ပါတယ်
hot Tags:: လျှပ်စစ် operated အပိုင်း အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်
ပေါကျကှဲခွငျး အထောက်အထား အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
လက်စွဲစာအုပ် အပေါ်မှထပ် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
module စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator
စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuator နှင့် handwheel
မြင့်သော အရှိန် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator နှင့် torque ပွောငျးလဲ
လိပ်စာ: NO.2608, တိုးတက်ရေး လမ်း, စီးပွားရေးဇုန် တိုးတက်ရေး ဧရိယာ, Ruian, Zhejiang, တရုတ်နိုင်ငံ 325200
သငျသညျ quotation အသို့မဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရှိပါကမှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး[email protected]သို့မဟုတ်အောက်ပါစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပုံစံကိုအသုံးပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ် 24 နာရီအတွင်းသင်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
မူပိုင် တစ်ဦး© 2019 Zhejiang Aoxiang auto-ထိန်းချုပ်ရေး နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်